Nke a bụ ndụmọdụ email gị maka oge ezumike 2014 | Martech Zone
Nke a bụ ndụmọdụ Email gị maka oge ezumike 2014
Email bụ naanị nke abụọ iji chọọ ọchịchị na ahịa n'oge oge ezumike. Ndị na-ere ahịa na-ejide, na-ebuwanye ibu email site na imirikiti 13 pasent afọ karịa afọ n'etiti 2012 na 2013. Obi abụọ adịghị ya na anyị ga-ahụkwa ọnụọgụ ọnụọgụ ọzọ n'afọ a ka ị wee nwee ịkwadebe. Nke a infographic si Email Ndị mọnk na-enye ụfọdụ ndụmọdụ siri ike na ụfọdụ nnukwu nkwado data iji nyere gị aka ịmalite ugbu a.
Sleigh hey na-ada ụda ma ọ bụ oge ugbu a iji jide oge ezumike a dị ịtụnanya na ahịa email. Kechie 2014 Q4 na ụdị yana ebigbọ ụtụ na imepụta mkpọsa email! Echefula, email bụ otu n'ime usoro nkwukọrịta kachasị aga nke ọma maka ndị ahịa na 2013.
Anyị keere naanị ole na ole ndudue ndị dị oke egwu ị kwesịrị ị na-ezere gị email ahịa usoro na a infographic ekwughachi ha! Atụmatụ gụnyere ijide n'aka na ị nwetara ezigbo ozi ederede email, jikọta mgbalị gị ịkwalite ezumike ezumike, Kwadebe ụfọdụ nnukwu ego, ma gbasaa ozi ịntanetị gị n'oge oge niile iji hụ na ọnụ ọgụgụ kacha emepe maka ndị na-azụ ahịa n'oge!
Oh, na oge erubeghị ịmalite. N'elu ọkara ndị ahịa email niile malitere ha ozi ịntanetị nkwalite ezumike na mbido Septemba iji jide ọkara ahịa nke na-amalite ịmalite oge. Echefukwala ịkọrọ ya ihe mmuta n’oge ezumike nke afọ gara aga na ụfọdụ Ekekọrịta usoro maka oge a ugbua.
Tags: Oge ezumike 2014ozi infographicozi ịre ahịa emailndị mọnk emailoge ezumikeinfographicimebe ihe eji eme ihe
Ma ugbu a maka Ọchịchịrị Ọchịchị nke Ọdịnaya B2B
Nke a bụ ihe anyị mere iji mee njem ụzọ atọ